लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज सोच्नै नसकिने गरी यस्तो भयो, हेर्नुहोस कति पुग्यो । – Sandesh Press
लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज सोच्नै नसकिने गरी यस्तो भयो, हेर्नुहोस कति पुग्यो ।
December 13, 2020 307
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मुल्य स्थिर रहदै प्रतितोला ९२ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार पनि छापावाला सुन तोलाको ९२ हजार ५ सयमा नै कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आइतबार तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९२ हजार ५० नै कायम रहेको छ । त्यसैगरी आइतबार चाँदीको मुल्य पनि स्थिर रहेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १२ सयमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
श्रीमती लाई बि’ग्रन नदिन ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु ( प्रदेशी मित्रहरुले अबस्य पढ्नुहोस )
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको म’स्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सा’स्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग म’स्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कु’म्ल्याएर अर्कैसंग भा’गेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं ।
प्राय आफ्नै लापर’बाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पी’डितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त । बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बि’ग्रिनु ।यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बि’ग्रिएका छन् । दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा ग’लत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।श्रीमिति लाई कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् श्रीमतीका हरेक भनाइमा च’नाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् ।
उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।घरमा एक्लै नछाड्नुहोस् आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतिलाई घरपरिवारसंगै राख्नुहोस् । सक्नुहुन्छ गाउँमै लगेर राख्नुहोस् । आमा बाबुसंग, शहर केन्द्रित ठाउँमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी शहरमा राख्नै पर्ने बा’ध्यता भए उनीप्रति च’नाखो बन्नुहोस् । उनको बारेमा जानकारी लिने माध्याम बनाएरै जानुहोस् ।
आमाबाबुको सबै कुरा सुन्नुपर्छ बुहारी भित्र्याएपछि सासु बुहारीको झ’गडा परे पनि यो क्षणिक श्रीमान श्रीमतिको झ’गडा जस्तै हो । बुहारीसंग सासु नबोली पनि ती तपाईकी आमा हुन् । उनले तपाईको कहिल्यै कु’भलो चिताउँदिनन् । त्यस्तैले श्रीमतीलाई भन्दाबढी आमा बाबुलाई बढी विश्वास गर्नुहोस् । श्रीमतीको विश्वासमा घरबार बि’गार्नेहरुको नै आफ्नै घरबार धेरै बि’ग्रिएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
Prevनेपाली सेनाका अधिकृत २१ वर्षीय पिटर थापाले बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाए
Nextकुन राशि भएका व्यक्तिले कुन दिशामा धनसम्पत्ती राख्दा हुन्छ फलिफाप ?
भर्खरैआयो डरलाग्दो सूचना, अत्यावश्यक काम बाहेक आज देखि घर बाहिर निस्किन नपाइने !
एटीएम’मा राखेको १२ लाख रुपैयाँ मुसाले काटेर धुजा-धुजा बनाएपछि
भक्तपुरमा घट्यो निकै दु:खदायी घटना, छोरासङ संगै थिईन आमा